MUQDISHU, Somalia- Guddiga Doorashada Gudoonka Barlamanka Somalia, ayaa soo saarey liiska musharaxiinta Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacbiga kuwaasoo maanta khudbadahooda ka hor jeedin doona Xildhibaanada dhawaan lasoo xulay ee fadhiga kuleh magaalada Muqdishu.
Musharaxiinta khudbadaha jeedinaya waxaa kamid ah; Xildhibaan Cawad Cabdalla, oo afartii sano ee lasoo dhaafay ahaa ku xigeenka labaad ee Gudomiyaha Barlamankii kan ka horeeyay.
Mudane kasta oo jagadaasi raadinaya, waxaa la siiyay min 15 Daqiiqo oo kaga waramayo waxqabadka uu la imaan doono 4 sano ee soo socota iyo taariikh nololeedkiisa.
Maanta, ayaa qorshu yahay in lasoo gaba-gabeeyo Khudbadaha musharaxiinta, iyadoo Doorashada Gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa la filayo inay dhacdo maalinta Khamiista soo socoto (11-12ka January), sida uu Gudiga Doorashadu horay u sheegay.
MUQDISHU, Somalia- Aqalka hoose ee Barlamanka Federaalka Somalia oo ku guda jira diyaargarowga doorashada gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen ayaa waxaa guddiyada qaban-qaabada doorashada loo soo gudbiyey liiska magacyada musharaxiinta u tartamaya xilalkaan.
​Xildhibaanada Somalia oo go'aan ka gaaray lacagta laga rabo Murashaxiinta Madaxweynaha iyo Barlamanka
​Barlamanka Cusub oo kulan uga furmay Muqdishu
​Barlamanka Somalia "Ma rabno in xitaa maalin naloogu daro"
​Somalia: Guddoonka Barlamanka oo xayiray safarrada Xildhibaanada
​Murashaxiinta Guddoonka Barlamanka Somalia oo maanta jeediyay khudbado